samsung galaxy tab s7 inowana muhombe $ 200 dhisikaundi kuazon
Kuru Nhau & Ongororo Samsung Galaxy Tab S7 inowana rakakura $ 200 dhisikaundi kuAmazon
Kunyangwe Samsung & apos; s Galaxy Tab S7 iri padyo padyo nepamusoro pemutengo wedenga, haigone kufananidzwa ne Apple & apos; s mahwendefa emureza. Zvakadaro, chishandiso chinoramba chiri imwe yemapiritsi eApple akanakisa uko, saka kana iwe & apos; tichinyatsotsvaga yakakwira-yekupedzisira Android slate, iyo Galaxy Tab S7 zvinogona kunge zviri izvo zvaunoda.
Kana ichangoburwa yeAmazon Prime Day yekutengesa chiitiko haina & apos; haina kunyatso bvisa bhajeti yako, iyo Galaxy Tab S7 yave kuwana mutero wakakura kuAmazon. Kazhinji kutengesa madhora mazana manomwe nemakumi matatu, Samsung & apos; s yepamusoro-tier piritsi iri $ 200 kubviswa kwenguva yakati rebei.
Iyo piritsi rinowanikwa mumavara matatu akasiyana - dema, sirivheri, uye nerweseri navy, asi chete maviri ekutanga akaderedzwa zvakanyanya. Zvakare, ita shuwa kuti iwe unosarudza iyo 256GB modhi sezvo iwo 128GB uye 512GB akasiyana ari kuwana zvidiki zvidimbu.
Ramba uchifunga kuti mutengo ndeweweWi-Fi Galaxy Tab S7, iyo inouya ine simba Qualcomm Snapdragon 865+ processor, 8GB RAM, uye 256GB inowedzerwa chengetedzo (inosvika 1TB). Zvakare, iyo piritsi inoratidzira yakakura 11-inch kuratidza, iyo mbiri-kamera (13MP + 5MP), yechipiri 8-megapixel selfie snapper, uye hombe 8,000 mAh bhatiri.
motorola x yakachena vs nexus 6p
Aya madhiri anotonhorera matsva achangoshandura Apple & apos; s iPhone XS uye XR muzvibvumirano zvakakwana
Maitiro ekuparadzanisa Gatling Variables
Samsung Galaxy S10 Plus: 10 Inofanirwa-kuziva Matipi & Matipi
Unogona here kubhadharisa iPhone nekukurumidza ine charger ine simba? Isu tinoongorora
Samsung Galaxy Cherekedza 4 ine mbiri SIM kadhi inokwenenzverwa pabhodhi mabhureki evhavha, kutanga muChina munguva pfupi